Gịnị bụ Kachasị Nnweta Shozụ ahịa Njin? | Martech Zone
Thursday, June 14, 2012 Thursday, June 14, 2012 Andrew Davis dee
Usoro CPC chịkọtara data sitere na ndị na-ere ahịa 100 dị n'ịntanetị nke nha dịgasị iche iche, ihe dịka nde 4.2 clicks na 8 nde ego ha nwetara iji chọpụta njirimara ahịa kachasị mma n'ịntanetị.
Ngwakọta ahịa ịzụ ahịa gụnyere weebụsaịtị dịka Pricegrabber, Nextag, Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon, Shopping.com, Shopzilla na Shozụ ahịa Google.
N'ime ọmụmụ ihe ahụ, anyị na-enyocha saịtị ịzụ ahịa kachasị mma maka azụmaahịa azụmaahịa ecommerce, ntinye ego, ọnụego mgbanwe, ọnụahịa nke ire ere, na ọnụ ahịa kwa ọnụego ọ bụla, ma gbakọọ ha iji chọpụta CSE dị arọ.
N'okpuru ebe a bụ nkọwa dị mkpirikpi nke Akụkọ Nkọwapụta Bestzụ ahịa Kasị Mma na 2012:
Ndi Bu Mmeri
Ndị CSE kacha elu 10
# 1: Nchọpụta Ngwaahịa Google (Oge na-adịghị anya ọ ga-abụ ịzụ ahịa Google - KWES --R - - ozi ndị ọzọ na nke ahụ Ebe a)*
Shozụ ahịa Google bụ CSE na-achị achị maka Q1 2011 na Q1 2012, ọ dịla anya oge ụfọdụ. Ọ bụ ezie na Shopzilla kụrụ Google maka okporo ụzọ zuru ezu na 2011, yana Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Amazon weghaara ụzọ kachasị elu maka 2012, Google na-ewepụta ọtụtụ okporo ụzọ na-achịkwa ma na-achịkwa n'akụkụ abụọ maka ego zuru ezu.
Nextag wetara ụlọ nke abụọ maka ogo CSE n'ozuzu ya maka afọ nke abụọ ma debe ọkwa kachasị n'etiti saịtị ịzụ ahịa na-akwụ ụgwọ maka 2012. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ zuru oke nke Nextag belatara site na afọ gara aga, ọ ka bụ nke abụọ kachasị na-akwọ ụgbọala na-akwọ ụgbọala ( mgbe Google), maka ma 2011 na 2012. Nextag nwekwara budata mma na usoro nke mgbanwe na-eri kwa click (CPC) ọnụego maka 2012.
# 3: Ahịa ahịa
Mgbe Shopzilla weghaara ebe kachasị elu engine maka 2011, Pricegrabber kpochapụrụ injin ahụ na Q1 2012. Ọ bụ ezie na ọnụego Pricegrabber nke COS na CPC belatara, okporo ụzọ na ego na-akwụ ụgwọ mgbe niile maka ebe abụọ ahụ.
Ebe Ntugharị Top
# 1: Ngwaahịa Google
Nchọpụta Ngwaahịa Google bụ nke abụọ kachasị na-amụba okporo ụzọ maka 2012, na isi iyi kachasị enweta ego maka ndị ahịa. N'ihi ya, maka 2011 na 2012, Google weghaara gold maka Conversion Rate na ọkwa anyị.
N'azụ Google na ego ha nwetara, Nextag bụ injin ntụgharị nke abụọ kachasị elu maka ndị ahịa na 2012.
Agbanyeghi njin dị obere, Pronto na-eme mkpọtụ siri ike maka mgbanwe ndị na-ere ahịa, na-achịkọta ngwa ọrụ atọ kacha elu maka ọnụego mgbanwe.
Ọnụahịa kacha mma nke ire ere (COS)
# 1: Ahịa ahịa
Gbaso CSE ndị na-enweghị ego, Pricegrabber nwetara ebe kachasị elu maka igwe kachasị mma na ụdị ọnụahịa nke ire ere (COS). Ọ dịkwa n'etiti engines nke belata COS n'ozuzu site na 2011 ruo 2012.
Ọ bụ ezie na Nextag's COS mụbara n'ezie maka 2012, ọ ka bụ nhọrọ nke abụọ kachasị mma maka igwe azụmaahịa maka COS.
# 3: ppingzụ ahịa.com
Chịkọta ndepụta ahụ, Shopping.com meriri Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Amazon maka nke atọ nke ala COS.
Ndị na-ebugharị na Shakers maka 2012
.Comzụ ahịa.com rutere n'ọdụ nke anọ ya n'ogo ogo nke afọ 2012, na mbụ ọ bịara na nke isii.
N'oge na-adịghị anya si na njedebe gaa na ọkwa zuru ezu ruo ebe 7th maka 2012.
Chakwasa Ntanetị: Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon
Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon bụ otu n'ime CSE ndị ọhụrụ nọ ebe ahụ ka ọ hụla uto kachasị na afọ ndị na-adịbeghị anya. Q1 2012 hụrụ mmụba dị ịrịba ama na okporo ụzọ maka Mgbasa Ozi Ngwaahịa Amazon, yana ọnụọgụ ego. Ọ bụ ezie na ọnụego ntụgharị maka Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon belatara site na Q1 2011 ruo Q1 2012, njupụta nke ndị na-ere ahịa na-edepụta na mmemme ahụ, ịsọrịta mpi na ibe ya nwere ike bụrụ ihe kpatara mbelata ntụgharị.
* Nchọpụta Ngwaahịa Google ga-abụ Shozụ ahịa Google na Ọktọba, mụta otu esi akwado ebe a.
Pịa njikọ na-esonụ iji lelee ọmụmụ ihe zuru ezu na kacha mma tụnyere ụlọ ahịa na saịtị.
Facebook Ad Ule, Akpaaka na Akuko
Apr 3, 2014 na 3: 49 PM
Olee isi ihe kpatara ọdịda shopzilla?
Sep 28, 2014 na 4:11 PM
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị ga-ede otu isiokwu yiri nke ọhụrụ na-abịa na Ngwakọta Nchọgharị Nchọpụta. Abụọ m na-eji mgbe niile bụ http://www.slycut.com na http://www.price zombie.com na ha na-enye azụmahịa dị ọnụ ala karịa ma ọ bụ nsonaazụ ndị na-atọ ụtọ karịa ndị nke ọdịnala ọdịnala.